Siyaasad Ma Gasho Hiilo Magangelyo | Midnimo Online | Somalia News and Media
Home Opinion Siyaasad Ma Gasho Hiilo Magangelyo
Siyaasad Ma Gasho Hiilo Magangelyo,Hanaanka ay ku shaqeyso siyaasadda dimoqaraadiyada waa mid ku dhisan siyaasad wadareed oo ah nidaam ogolaanaya wadanoolaashaha fikrado siyaasadeed oo kala duwan, kuwaas oo ka turjumaya aragtiyada siyaasadeed ee xisbiyo badan oo mabda’yadoodu kala duwan yihiin. Dowladda rumeysan xukunka rayidka ee ku saleysan dimoqaraadiyada waxey ku qasban tahay iney ogolaato mucaaradka siyaasadeed oo ah shardiga ugu weyn ee jiritaanka dowlad dimoqaraadiya.
Dimoqaraadiyadu waxey habdhaqanka dastuurkeedu raacsan yahay jiritaanka cadowtooyada siyaasadeed ee ka dhexeysa xisbiyada siyaasadeed oo si nabada awooda siyaasadeed u adeegsada. Dhaqankeedana waxaa ka mida jiritaanka mucuuradka oo leh miisaan siyaasadeed oo dheelitira xukuumadda talada haysa iyo hanaanka guud ee siyaasadda dalka. Cida siyaasadda ku guuleysta ma ahan iney milkiso dhamaan awooda siyaasadeed, waxaana qasab ku ah kuwa guuleystey iney u ogolaadaan mucaaradka ka qeybgalka masuuliyada geedi-socodka siyaasadeed ee looga arinsanayo aayaha dalka. Dheelitirka looga hortegayo iney koox keligeed hanato talada dalka waxaa ilaaliya dhowrista xuquuqda mucaaradka, taas oo aqoonsigeedu uu dhalin karo damaanadqaad wadahadal siyaasadeed oo waxtar leh iyo wakhti dheer in lagu wadanoolaado degenaansho dimoqaraadiya.
Mucaaradka iyo kooxda talada haysa waxey isku hayaan waa awooda siyaasadeed ee dalka. Haddii madaxda dalka aysan ku imaan doorasho dadweyne oo si toosa ay ugu codeeyeen rabitaankooda oo xor ah, madaxda guuleysatey waxey ku qasban yihiin iney soo dhisaan dowlad wadajira oo ka kooban xoogaga siyaasadeed ee dalka ka jira, kuwaas oo aaminsan dhaqanka siyaasad nabadgelyo oo ku dhisan xukun dimoqaraadiya.
arabadida iyo xoogeysiga mucaaradka wuxuu ku xiran yahay dhaqanka xukuumada ay ama ku soo dhoweyneyso mucaaradka ama ay ku caburineyso ama habdhaqanka kelitalisnimo ee madaxda dowladdu ay ku dooneyso aragtideeda iyo xisbigeeda keliya inuu yeesho waxkadhihida siyaasada dalka , iyaga oo adeegsanaya ku tagrifalka awooda dowladda iyo hantida qaranka.
1) ujeedada loo tartamayo oo lagu koobo bartilmaameysiga hanashada awooda siyaasadeed.
2) muujinta dulqaadka loogu adeegsanayo masuuliyada awooda.
Waxaa muuqata dagaalada soo socda iney ka khatar badan yihiin kuwii hore, waxaana saadaashaas xoojinaya sida cad ee boqortooyooyinka Khlaiijka khilaafkooda uu uga muuqdo Soomaaliya, iyaga oo doonaya sida Yemen dagaalada ka socda in sidoo kale uu dagaalkooda ka bilowdo Soomaaliya, taas oo keeneysa labada xulafo xoogga isbaheysigooda in lagu tijaabiyo Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya khilaafka Carabta dhexdhexaad kama aha, wuxuuna si hoose hiilada ula wadaaga mid ka mida labada isbaheysi oo ay wadaagaan siyaasada iyo xeeladaha sirdoonka, kuwaas oo lagu dhabarjebinayo dadaalada waxqabad oo ay wadaan isbaheysiga ka soo horjeeda. Waxaa xataa socota iskaashiga koox-diimeedyada Ictisaam iyo Shiicada oo la doonayo dowlada iyo xulafadeeda iney garab u noqdaan.